Mavhesi emuBhaibheri Anonyaradza Paunenge Uchishungurudzika
SARUDZA MUTAURO Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aukan Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Batak (Karo) Batak (Toba) Bengali Biak Bicol Bislama Bulgarian Cakchiquel (Western) Cambodian Catalan Cebuano ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiKaren (S'gaw) ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Drehu Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Iban Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kabiye Kannada Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisonge Kongo Korean Krio Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Lamba Lhukonzo Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Marathi Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mizo Mongolian Moore Myanmar Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngangela Nias Norwegian Nyungwe Nzema Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (Cameroon) Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Runyankore Russian Samoan Sango Saramaccan Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tojolabal Tok Pisin Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uruund Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zulu
Pane mazano akawanda anopiwa nevanhu panyaya iyi. Asi haasi ese anobatsira. Semuenzaniso vamwe vanogona kukuudza kuti usachema kana kutomboratidza kurwadziwa kwaunenge uchiita. Vamwe vanogona kukukurudzira kuti ucheme zvekuchema zviya. Asi Bhaibheri rinotaura zvakasiyana neizvi uye zvarinotaura zvinotsigirwawo neongororo dziri kuitwa mazuva ano.
Mune dzimwe tsika zvinonzi kana uri murume haufanire kuchema. Asi pane chikonzero here chekuti munhu anyare kubudisa misodzi, kunyange paruzhinji? Vaongorori vemashandiro anoita pfungwa vanoti kana munhu achinge afirwa anowanzobudisa misodzi. Uye kuchema kunogona kuzokubatsira kuti unzwe zviri nani pasinei nekurasikirwa kwaunenge waita. Kana munhu akavanza kurwadziwa kwaanenge achiita zvinogona kumukuvadza pane kuti zvimubatsire. Bhaibheri haritsigiri pfungwa yekuti kuchema kwakaipa kana kuti murume haacheme. Semuenzaniso, funga nezvaJesu. Kunyange zvazvo aiva nesimba rekumutsa vakafa, shamwari yake Razaro payakafa, akachema vanhu vachizviona!​—Johani 11:33-35.
Kazhinji kana munhu akafirwa asingazvitarisiri anoita nguva dzaanombotsamwa. Pane zvikonzero zvakawanda zvingaita kuti munhu anenge afirwa atsamwe. Izvi zvinoitika kana munhu anoremekedzwa akataura asina kufunga uye akataura mashoko asiri echokwadi. Mumwe murume wekuSouth Africa anonzi Mike anoti: “Baba vangu pavakafa ndaingova nemakore 14 chete. Parufu rwavo mumwe mufundisi weAnglican akati Mwari anoda kuva nevanhu vakanaka uye anokurumidza kuvatora. * Izvi zvakandigumbura nokuti taida chaizvo kuva nababa vedu. Kunyange zvazvo papera makore 63, zvichiri kundirwadza.”
Ko kana munhu anenge afirwa achizvipa mhosva? Kana ukafirwa usingazvitarisiri, unogona kuramba uchifunga kuti, ‘Zvimwe dai ndakaita izvi neizvi angadai asina kufa.’ Kana kuti pawakapedzisira kutaura nemufi wacho makapopotedzana. Izvi zvinogona kuita kuti uwedzere kuzvipa mhosva.
Kana uchigara uchizvipa mhosva uye uchimbotsamwa, zvinokosha kuti usakuvarire mukati. Taura neshamwari inogona kukuteerera yokubatsira kuona kuti manzwiro iwayo anowanzoitika kune vakawanda vanenge vafirwa. Bhaibheri rinoti: “Shamwari yechokwadi ine rudo nguva dzose, uye ihama inoberekerwa kubatsira pakunenge kuine kutambudzika.”​—Zvirevo 17:17.
Musiki wedu Jehovha Mwari ndiye anogona kuva Shamwari inopfuura dzose kumunhu anenge afirwa. Nyengetera kwaari uchitaura zvose zvinenge zvichikunetsa nokuti ‘iye ane hanya newe.’ (1 Petro 5:7) Anovimbisawo kuti vose vanonyengetera kwaari vachanyatsozorodzwa mupfungwa ‘nerugare rwaMwari runopfuura kufunga kwose.’ (VaFiripi 4:6, 7) Uyewo, bvumira Mwari kuti akubatsire kuti unzwe zviri nani achishandisa shoko rake rinonyaradza, Bhaibheri. Nyora pasi mavhesi anonyaradza. (Ona bhokisi.) Zvinogona kukubatsira kana ukabata mamwe acho nemusoro. Kana ukafunga nezvemavhesi akadaro zvichakubatsira chaizvo kunyanya usiku paunenge uri wega uchishaya hope.​—Isaya 57:15.
Munguva ichangopfuura, murume ane makore 40, watichati Jack, akafirwa nemudzimai wake pashure pekunge arwara nekenza. Jack anotaura kuti dzimwe nguva anosurukirwa chaizvo. Asi anobatsirwa nekunyengetera. Anoti: “Pandinonyengetera kuna Jehovha, handizosurukirwi. Ndinowanzopepuka usiku uye hope dzinobva dzaramba kuuya. Pashure pekunge ndaverenga mashoko anonyaradza ari muMagwaro ndofunga nezvawo uye ndonyengetera ndichitaura zvose zvinondinetsa, ndinobva ndatanga kunzwa kugadzikana mumwoyo nemupfungwa uye hope dzinobva dzauya zvekare.”
Musikana anonzi Vanessa akafirwa naamai vake pashure pekunge varwara. Akaonawo kubatsira kunoita kunyengetera. Anoti: “Zvinhu pazvainge zvakandiomera chaizvo, ndaibva ndanyengetera kuna Mwari ndochema. Jehovha ainzwa minyengetero yangu uye aindipa simba randaida.”
Vamwe vevanopa mazano kune vanenge vafirwa vanokurudzira vanenge vachishungurudzika kuti vazvipire kuita mabasa ekubatsira vanhu munharaunda. Kana vakaita izvozvo vanogona kufara uye kushungurudzika kwavo kunogona kudzikira. (Mabasa 20:35) VaKristu vakawanda vakafirwa vakaona kuti kuita mabasa ekubatsira vamwe kwakaita kuti vanyaradzwe zvikuru.​—2 VaKorinde 1:3, 4.
^ ndima 5 Izvi handizvo zvinodzidziswa neBhaibheri. Bhaibheri rinoratidza kuti rufu runokonzerwa nezvinhu zvitatu.​—Muparidzi 9:11; Johani 8:44; VaRoma 5:12.
MAVHESI EMUBHAIBHERI ANONYARADZA
Mwari paanoona uchirwadziwa naiye anorwadziwawo.​—Pisarema 55:22; 1 Petro 5:7.
Mwari haaneti nekuteerera minyengetero yevashumiri vake.​—Pisarema 86:5; 1 VaTesaronika 5:17.
Mwari anosuwa vanhu vakafa.​—Jobho 14:13-15.
Mwari anovimbisa kuti achamutsa vakafa.​—Isaya 26:19; Johani 5:28, 29.
Kunyange shamwari dzepedyo dzinogona kutadza kuziva kuti munhu afirwa anoda kuitirwei.